“Kick-off – Futsal Tournament”: nahintsan’ny Aceem ny Cnela | NewsMada
“Kick-off – Futsal Tournament”: nahintsan’ny Aceem ny Cnela
Anisan’ny lalao nandrasan’ny rehetra, omaly alarobia, ny fihaonana teo amin’ny Cnela sy ny Aceem, ho an’ny sokajy B, teo amin’ny taranja “Kick-off – Futsal tournament 2019”. Lalao notontosaina, tao amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Niady ny tapakila farany, hiakarana amin’ny dingana ampahavalon-dalana, mantsy izy ireo.
Nomontsanin’ny Aceem, tamin’ny isa mazava 7 no ho 2, mantsy ny Cnela. Tsy namaly ny hetahetan’ny mpijery ny fihaonana teo amin’ny roa tonta satria tsy nahatohitra mihitsy ny mpianatra teny anglisy, tamin’ity lalao ity. Nanantombo teo amin’ny fahakingana sy ny hafainganam-pandeha ny Aceem. Ankoatra izay, nisaraka ady sahala 2 no ho 2 ny Esmia sy ny INTH, ho an’ity vondrona ity ihany. Izy ireo izay efa samy tafakatra amin’ny dingana manaraka avokoa. Mbola ady sahala, 1 sy 1, ihany koa ny lalaon’ny Essca sy ny Esmia. Teo amin’ny vondrona D, lavon’ny UCM, 4 no ho 0, ny E-Media, ary nomontsanin’ny St Michel, tamin’ny isa mavesatra, 7 no ho 2, ny Icame.
Ho an’ny sokajy C, nisaraka ady sahala, 4 no ho 4, ny Toekarena sy ny Imgam. Ny Iscam, nanilika ny Polytechnique, tamin’ny isa 5 no ho 3. Lalao niady sy nampitsanga-mitoetra hatramin’ny farany.
Teo amin’ny vondrona A, ny Institut des universités de Madagascar (IUM), nandavo ny Infotour, tamin’ny isa 5 no ho 2. Hitohy anio ny fifanintsanana farany, mialoha ny hidirana amin’ny ampahavalon-dalana sy ny ampahefa-dalana, hatao rahampitso zoma 12 avrily.